मायाको शहरमा हराएका हरि – Halkaro
माया पनि खरिद बिक्री हुँदो रहेछ तिम्रो शहरमा
सुनलाई पनि खियाले छुँदो रहेछ तिम्रो शहरमा
तिम्रो शहरमा फलाम पनि हीराको ठाँउ खोज्न थालेछ कि ढुङ्गा पनि देवताको ठाँउ खोज्न थालेछ कि …….
हरिहर तिमिल्सिनाका माया पिरतीका यि शक्तिशाली गितीका शब्द निकै चर्चित मानिन्छन् । यीनको गीत जत्तिकै रसिला कविता पनि छन् । मौसम बैमान थियो । कहिले घाम त कहिले पानी बिदाको दिन थियो, सबै फुर्सदमा थिए । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे मञ्चमा उपस्थित थिए ‘गाँउ हराएको साँझ’ कविता संग्रहको लोकापर्ण गर्न । मञ्चभरी युवा कवि र साहित्यकारहरुको उपस्थिती थियो ।
तिनै युवाकविहरुको प्रेमलाई उतार्दै थिए कवितामा कवि हरिहर ।
तिमीलाई हेर्दा हेर्दै मेरो आँखाहरु उडेर चरा भए
तिम्रो हृदयको तिम्खोनीलाई स्पर्ष गर्न खोज्दा, मेरो ह्दय हरायो र वतास भयो
बेजोड प्रस्तुती त्यसमा पनि माया पिरतीका कुरा युवाहरुलाई मात्र होइन वृद्धहरुको समेत मनमा चसक्क भइरहेको थियो । वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भुकम्प भन्दा अगाडी नै उनले आफ्नो कविता संग्रहको लोकपर्ण गर्न खोजेका थिए । देश दुख्दा उनको मन पनि दुख्यो र उनी रोकिए यसरी प्रेमील हुन तीन महिना ।
ठमेलको होली हिमालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा साहित्य प्रेमीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । उनले लेखेका ५० भन्दा बढी गित रेकर्ड भैसकेका छन् । कविता संग्रहमा अहिलेका आममान्छेका भोगाई, राजनीति, समाज, गरिबी ,भोक देखि प्रेम र जनयुद्धसम्म कृतिमा समेटिएको उनले बताए ।
कार्यक्रमका आर्कषकको रुपमा रहेका राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरले युवा प्रेमीहरुलाई लक्षित गर्दै भने ‘बुढो मान्छेले धेरै के बोल्ने ? बोल्ने कुरा धेरै छैन ।’ ठटेयौली पाराममा उनी बोल्दै गर्दा ठट्यौली पारामा भन्दा हल नै गुञ्जायमान भयो । जब उनी बोल्दै थिए । शरिर बुढो भए पनि उनको मन भने तन्नेरी झै लाग्थ्यो ।
राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले बोलेका केही दृष्य प्रस्तुत गरिएको छ ।
← लिपुलेक सम्झौताः नेपालको सार्वभौमिकता विरुद्धको कदम